Wararka Kooxda Barcelona Ee Xidigaha Dhaawaca Iyo Kuwa Ku Maqan Ganaaxa
HomeHoryaalka SpainWararka Kooxda Barcelona ee Xidigaha dhaawaca iyo kuwa ku maqan ganaaxa
Barcelona ayaa isha ku heysa inay ku soo laabato wadada guusha ee La Liga marka ay sii wadato ololaheeda 2020-21 ee ay gurigeeda kula ciyaarayaan Osasuna galabnimada Axada.
Ciyaaro.com ayaa soo koobaysa dhaawicii ugu dambeeyay ee Barca iyo warkii ganaaxa ka hor kulanka Osasuna, kuwaas oo helay 11 dhibcood 9-kii kulan ee ay ciyaareen xilli ciyaareedkan si ay u fadhiistaan ​​kaalinta 14-aad.
Samuel Umtiti, oo si xoogan loola xiriirinayay inuu ka tagayo Camp Nou ayaan weli ciyaarin xilli ciyaareedkan sababo la xiriira dhibaatooyin jilibka ah oo soo wajahay, markalena kuma soo lug yeelan doono kulanka usbuucaan.
Ronald Araujo ayaa lagu qasbay inuu garoonka ka baxo kulankii Juventus ee bishii hore ka dib markii uu dhaawac muruqa ah soo gaaray qeybtii hore ee kulankii Europe. Barca ayaa mar kale waayi doonta daafaca dhexe kulanka Osasuna, laakiin waxaa jirta fursad uu ugu soo laaban karo tababarka labada isbuuc ee soo socota.
Barca ayaa la filayaa inay waayi doonto adeega Ansu Fati afarta bilood ee soo socota, iyadoo da ‘yarkaan xiisaha leh dhowaan lagu sameeyay qalliin si looga hadlo dhaawac jilibka ah oo uu ka soo qaaday kulankii Betis.
Barca ayaa mar kale waayi doonta adeega Sergio Busquets maalinta Axada sababo la xiriira dhibaatada jilibka ah ee uu xiddigan khadka dhexe ee qibrada leh ka soo qaaday intii uu ku maqnaa xulkiisa Spain. 32 jirkaan ayaan la fileynin inuu diyaar u noqdo xulkiisa illaa iyo bartamaha bisha Diseembar.
Gerard Pique ayaa la bedelay kaliya saacad ka dib kulankii Atletico ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray jilibka midig, daafaca dhexe ayaa wajahaya waqti dheer oo uu garoomada uga maqnaan doono – ugu badnaan shan bilood – ka dib markii la xaqiijiyay inuu dhib soo gaaray.
Sergi Roberto ayaa awooday inuu dhameystiro 90-ka daqiiqo ee kulankii Atletico dhamaadki usbuucii la soo dhaafay, laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa waxaa soo wajahay dhibaato dhanka muruqa ah intii lagu gudajiray tartankan waxaana baaritaanada la sameeyay lagu ogaaday tan iyo markii uu jab ka soo gaaray jilibka midig ee jilibka lugtiisa midig. inta dhiman ee 2020.